Madaxda Dowladda oo ka laabtay amarkii lagu weerari lahaa Saad... | Universal Somali TV
Dowladda Somaliya ayaa ugu dambeen ka tanaasushay amarkii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee ahaa in la soo xiro Taliyihii hore ee Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, General Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon).
Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa xalay fiidkii loo diyaariyay inay weeraraan hoyga uu General Saadaq Joon Arbacadii ka degay xaafadda Shirkoole Officiale ee Degmada Hodan. Xoogaga Haramcad ayaana lagu arkayay wadooyinka soo gala xaafadaasi.
Wax walba waxay is bedeleen ka dib markii ay miro dhaleen dadaalo uu qayb ka ahaa Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo ka horyimid in ninkaasi la weeraro. Madaxweyne Qoorqoor ayaa Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka codsaday in laga baaqsado weerar uu dhiig ku daato.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala) uu saqdii dhexe ee xalay hoygiisa ku booqday General Saadaq Joon, isagoona ugu baaqay inuu aqbalo soo jeedin uu markaasi u waday, taasoo la sheegay in uu ka aqbalay.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya Saadaq Joon in goor dambe oo xalay ahayd uu la kulmay Ra'iisal Wasaare Rooble, isla-markaana ay ka wadahadleen safar musaafurin ah oo ninkaasi lagu sameynayo.
Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala), Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliya ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in Muqdisho ay nabad tahay.
"Muqdisho waa nabad, waana ahaaneysaa Ilaahay idankiis. Kuwa xumaha ku duceysanaya waxaan leenahay iimaanka Ilaahay ha idin geliyo. Haddii aad filayseen war weyn oo xun, fisha war weyn oo wanaagsan." Ayuu yiri Alcadaala.
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) ayaa sheegay inaanay wax caqabad ama colaad ahi ka jirin Magaalada Muqdisho.
"Waxaan u cadeyneynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ama colaad ah inaba hala ekaatee. Laamaha amnigu waxay u taagan yihiin habeen iyo maalin, sidii ay uga hortaggi lahaayen isku day kasta oo leesku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka, nabadda iyo horumarka, sida xawaaraha uga socda Magaalada Muqdisho." Ayuu yiri Cali Yare.
Marka laga soo taggo hadalka ka soo yeeray Cali Yare ayaa waxaa jira ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in Villa Somalia ay bedeshay mowqifkeedii hore ee ahaa in la weeraro, lana soo xiro Saadaq Joon, sababtuna ay tahay in Isniintii uu hakiyay kulankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ku meelmariyeen Sharciga gaarka ah ee jiheynaya doorashooyinka dalka. Villa Somalia ayaa tuhunsaneyd in jananka ay shisheeyuhu adeegsadeen.
Ilo wareedyadu waxay sheegayan in Madaxda Dowladda Federaalka ku qanceen in Saadaq Joon uu si nabdoon uga ambabaxo Magaalada Muqdisho, si looga baaqsado dagaal uu dhiig ku daato.
Sharciga gaarka ah ee Golaha Shacabka meelmariyeen ayaa dabka ku sii shiday xaaladda siyaasadeed ee dalka, oo markii horeba uu jahwareer badan ka taagnaa.
Sharcigan ayaa Hay'adaha Dowladda Federaalka u ogolanaya inay muddo laba sano oo kale sii jooggaan, inkastoo ay si weyn uga horyimaadeen Golaha Midowga Musharaxiinta, Maamulada Puntland, Jubbaland, Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya iyo weliba Beesha Caalamka.
Iskusoo wada-duuboo xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa maanta degan, ka dib dhiiladii colaadeed ee xalay laga dareemay.
Kan-xigaMaxkamad xukun dil ah ku xukuntay nin...
Kan-horeCiidamada Galmudug oo hawlgal ka same...
60,297,658 unique visits